Chelsea Oo U Soo Baxday Wareega 4aad Ee FA Cup Iyo Taatiko Bedel Uu Mourinho Sameeyay Oo Guuldarro Ka Badbaadisay Tottenham – Heemaal News Network
Chelsea Oo U Soo Baxday Wareega 4aad Ee FA Cup Iyo Taatiko Bedel Uu Mourinho Sameeyay Oo Guuldarro Ka Badbaadisay Tottenham
Chelsea ayaa u soo gudubtay wareega afaraad ee koobka FA Cup ka dib markii ay 2-0 ku xaaqeen kooxda faca weyn ee ka ciyaarta horyaalka heerka labaad ee Ingariiska Nottingham Forest.
Tababare Lampard ayaa sagaal bedel ku sameeyay shaxdiisa iyadoo Reece James iyo Jorginho kaliya ay ceshteen booskooda safka kooxda, waxaana lagu soo bilaabay xiddigaha kala ah Caballero, Tomori, Christensen, Emerson, Kovacic, Barkley, Pedro, Batshuayi iyo Hudson-Odoi.
Lix daqiiqo ayay ku qaadatay kooxda Blues inay hogaanka u qabato ciyaarta markii Callum Hudson-Odoi uu garabka midig ka soo xarooday islamarkaana uu kubad hoose dabamariyay goolhaye Smith.
Daqiiqadii 24aad kooxda Forest waxaa loo dhigay rigoore markii Tomori uu qalad ku galay Mighten laakiin VAR ayaa diiday rigoorada madaama qalad ka hor uu Mighten offside ahaa iyadoo gacantiisa ay garab dhaaf sameysay.
Chelsea ayaa heshay goolkeedii labaad daqiiqadii 33aad iyadoo Hudson-Odoi uu dhibaato u abuuray kooxda Forst, waxaa darbadiisa soo bixiyay goolhaye Smith laakiin waxay fursad u noqotay Ross Barkley oo si aayar ah shabaqa ugu taabtay.
Qeybtii labaad wax gool ah la iskama dhalinin iyadoo kubad uu badbaadiyay goolhaye Smith oo ka timid Ross Barkley ay ku dhacday birta, waxayna ciyaarta ku soo idlaatay 2-0 oo ay Blues ku garaacday Forest, waxayna iska xaadiriyeen wareega xiga ee FA Cup.
Dhanka kale Taatiko bedel uu sameeyay Jose Mourinho ayuu kaga badbaadiyay kooxdiisa Tottenham guuldarro ceeb ah oo ka soo gaari laheyd Middlesbrough kuwaasoo ay ku kala baxeen barbaro gool iyo gool ah islamarkaana isku balansadeen kulan ku celis ah.
Middlesbrough ayaa hogaanka ku hormartay daqiiqadii 50aad markii Fletcher uu ku qasbay goolhaye Gazzaniga inuu kubada shabaqa iska sii geliyo. Ku celiskii la daawaday ayaa muujinayay in offside uu jiray laakiin VAR looma isticmaaleynin kulankaan.
Mourinho ayaa goolka ka dib waxa uu bedel ku soo geliyay Lo Celso iyo Lamela isagoo shax ciyaareedkiisa u bedelay 4-4-2 markaasoo Spurs ay bilowdat inay dhaqdhaqaaq fiican sameyso.
Wuu ku faa’iday isbedel uu sameeyay iyadoo Spurs ay dhalisay goolka barbaraha daqiiqadii 62aad markii karoos uu soo dhigay Aurier uu madax ku dhaliyay Lucas Moura.
Waxay ciyaarta ku dhamaatay 1-1 iyadoo kulanka ku celiska ah marti loo noqon doono kooxda Tottenham.
Tababar Lagu Xoojinayo Dhinaca Cilmi-baarista Oo loo Qabtay Masuuliyiinta Jamacada Camuud.
Baarlamanka Ciraaq Oo Meel-mariyay Qaraar ka Dhan ah Ciidamada Maraykanka.